​गुल्मीमा क्लोथ बैंक स्थापना
गुल्मी । गुल्मीमा कपडा किन्न नसक्नेका लागि क्लोथ बैंक अर्थात् कपडा घरको स्थापना गरिएको छ । विभिन्न समयमा विपद्मा परेका तथा गरिबीका कारणले लुगा किनेर लगाउन नसक्नेका लागि क्लोथ बैंकको..
​स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घमा अर्याल
बुटवल । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा हरिप्रसाद अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ । महासङ्घको आज सम्पन्न चौथो महाधिवेशनमा अर्याल निर्विरोध चयन हुनुभएको हो । महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रभात..
​सडकमार्गबाट ल्याउन अवरोध सिर्जना भएपछि व्यवसायीले रेलमार्गबाट सामान ल्याउन थाले
वीरगन्ज । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान सडकमार्गबाट ल्याउन अवरोध सिर्जना हुन थालेपछि व्यवसायीले रेलमार्गलाई बढी सदुपयोग गर्न थालेका छन् । आयातित सामान बोकेर भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने कन्टेनर मालबाहक रेलमार्फत आउन..
​भेरी नदी किनारमा सुन खोज्दै चिनियाँ कम्पनी
जाजरकोट । भेरी नदीको किनारमा एक चिनियाँ कम्पनीले सुनखानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । जाजरकोटको खलङ्गा धल्ला र जगतिपुर मटेलास्थित भेरी नदीको बगरमा चिनियाँ कम्पनी धर्मश्री माइनले सुनखानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको..
​सात सय महिला आयमूलक व्यवसायमा
भीमदत्तनगर । महिला तथा बालबालिका कार्यालय कञ्चनपुरले अनुदान दिएपछि जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण भेगका सात सयभन्दा बढी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला आयमूलक व्यवसायमा लागेका छन् । महिलाको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन..
एक साताभित्र पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्ति सहज हुने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ उपत्यकामा अब एक साताभित्र पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्ति सहज हुने जनाएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले निगमका देशभरका..
​विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विधयेक, २०७१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई आज स्वीकृत गरेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पेस गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।..
​नाकाबन्दीपछि ५७३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि तथ्यांक सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भारतीय नाकाबन्दीपछि औसत ११ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसको कैयौं गुणासम्म बढेको छ । राष्ट्र बैंकले मंसिरमा औसत मूल्यवृद्धि..
​राजस्व बढ्न थाल्यो
चितवन । नाकाबन्दीको प्रभावका कारण ओरालो लागेको राजस्व सङ्कलन नाका सहज भएसँगै उकालो लाग्न थालेको छ । चितवन र नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वका क्षेत्र हेर्दै आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा भदौ, असोज..
​आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व घाटा
वीरगन्ज । भारतीय रेलमार्ग सञ्जालसँग जोडिएको नेपालको एकमात्र वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट आयातनिर्यात प्रभावित भएपछि रु दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको छ । आयात निर्यात प्रभावित हु“दा सुक्खा बन्दरगाह..
​राजधानीमा सुरु भयो बंगलादेश एक्स्पो
काठमाडौं । नेपालका लागि बंगलादेशी राजदुताबासको आयोजनामा राजधानीमा ५ दिने व्यापार मेला सुरु भएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीचको व्पापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्धेश्यका साथ दुतावासले बंगलादेश एक्सपो २०१६ को..
सुनको मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँले बढेपछि ५० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । लगातार उतार-चढाब आइरहेको सुनको मूल्य आज बिहिबार प्रतितोला ५० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस अघि हिजो बुधबार सुन प्रतिोला ५० हजार १ सय ५०..
​इन्धन वितरण पारदर्शी नभए कारबाही गर्ने अख्तियारको चेतावनी
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्धन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आज आपूर्ति सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर..
​कस्ले किन्ने ? चिनिया अनुदानको इन्डक्सन चुलो १२ हजार मूल्यमा
काठमाडौं । चीनबाट ल्याएको अनुदानको इन्डक्सन चुलो सोमबारदेखि मूल्य तोकेर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको छ। नेसनल ट्रेडिङ टेकुबाट सर्वसाधारणले चुलो किन्न सक्ने छन्। यद्यपी चुलोको मूल्य महँगो भएपछि आजसम्म एउटा..
​पूर्वी नाका काँकडभिट्टा पूरै सहज
काँकडभिट्टा । नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको असर पूरै हटेको छ । पूर्वी नाकाबाट पूर्ववत् अवस्थामै सवारी भित्रन थालेपछि अवस्था पूर्ण रुपमा सहज भएको हो । भारतको पानीट्यांकीबाट..
​दमौली महोत्सवमा साढे छ करोडको कारोबार
दमौली । दोस्रो दमौली महोत्सवको तीन लाख १८ हजार दर्शकले अवलोकन गरेका छन् । सोमबार सम्पन्न महोत्सवमा रु छ करोड ३२ लाख बराबरको आर्थिक कारोबार भएको महोत्सवका प्रवक्ता तुलसीराम पाण्डेले बताउनुभयो..
​पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, पेट्रोल ९९, डिजेल र मट्टितेल ७५ रुपैया
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले यही माघ २ गते पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको हो..
सबैभन्दा धनी एक प्रतिशतसँग विश्वको आधा सम्पत्ति
एजेन्सी । विश्वको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत जनसंख्यासँग बाँकी ९९ प्रतिशतसँग भए बराबरको सम्पत्ति भएको सार्वजनिक भएको छ। बिबिसिमा उल्लेख भएअनुसार गरिबी उन्मुलनको लागि काम गर्ने गैर सरकारी..
​बन्दमा रु सैंतीस करोडको सिमेन्ट उत्पादन
उदयपुर । बन्द र हड्तालका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले रु ३७ करोड बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ । जिल्लाको जलजलेमा रहेको सो उद्योगले असोजयता पाँच लाख २५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन..
​राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि
पर्सा । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले पुस महिनामा रु एक अर्ब ४३ करोड १८ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा कार्यालयले रु एक अर्ब ७० करोड १५..
​विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा पर्यटन व्यवसाय खस्किँदै
कञ्चनपुर । दुई दशकअघिदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ । विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा यहाँका महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल ओझेलमा परेका..
​तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढ्यो सुन, चाँदीको भाउ भने स्थिर
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबारको तुलनामा आज सुनको भाउ तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेर ४९ हजार नौ सय रुपैंयामा..
​बोधिचित्त माला चीन लैजाने तयारी
बनेपा । बोधिचित्त मालाको फल करोडौँं मूल्यमा खरिद गरेर नाफा कमाउने आशामा बसेका काभ्रेपलाञ्चोक बोल्देफेदिचे– २ का चन्द्रध्वज लामा अहिले तनावमा हुनुहुन्छ । उहाँ आफूले किनेको बोधिचित्तको माला पैठारी हुन..
​सहकारी बन्यो महिलाको सहारा
बागलुङ । विसं २०६१ मा धम्जाका महिला मिलेर प्रगतिशिल बहुउद्देश्यीय संस्था सञ्चालनमा आएपछि अहिले उनीहरुको जीवनमा नसोचेको परिवर्तन आएको छ । धम्जा–३ कि लक्ष्मी विक हिजोआज ऋण चाहिए कुनै साहु कहाँ..
​तत्काल माग सम्बोधन नगरे २ हजार उद्योग संकटमा
वीरगन्ज । चर्को विद्युत्भार कटौतीका कारण विशेषगरी वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग व्यवसायलाई नराम्रो असर पर्नेक्रम बढ्दै गएकाले सो असरलाई राज्यपक्षबाट सम्बोधन गर्न तत्कालै आवश्यक र उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न यस..
​आजको माघे संक्राति पर्वमा ६ करोड रुपैयाको तरुल खपत
काठमाडौं । इन्धन अभावले आपूर्तिमा समस्या भए पनि यो माघे संक्रान्तिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तरुल खपत ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार यो..
स्ट्यान्डर्ड च्यार्टर बैंक र ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलबीच सम्झौता
काठमाडौ । ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल र स्ट्यान्डर्ड च्यार्टर बैंकबीच आर्थिक कारोबारका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ग्रान्डीमा उपचार गराउने बैंकका मुख्य ग्राहकले १० प्रतिशत र बैंकको डेबिट र..
भीड बढेपछि बिग सेल मेलाको अवधि माघ ११ गतेसम्म थपियो
काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा राजधानिको भृकुटीमण्डपमा भईरहेको पाँचौ बिगसेल मेला एवम् फुटवयेर एक्स्पो माघ ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । सिमित अवधिको लागि भन्दै पुस १७ गतेदेखि शुरु..
​नाकाबन्दीले इँटा उद्योग प्रभावित
चितवन । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि काम थाल्नुपर्ने समयमा नाकाबन्दीका कारण इँटाभट्टा सञ्चालनमा आउन नसक्दा काम प्रभावित भएको छ । चिम्नीमा मट्टितेल, दाउरा र ग्यास नहुँदा समस्या भएको छ भने..
​भारतीय नाकाबाट सोमबार ४१ बुलेट ग्यास नेपाल भित्रियो
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरुबाट सोमबार पनि इन्धन आयात प्रभावित बन्यो । सोमबार दिनभरमा काँकडभिट्टा–पानीट्यांकी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका १ सय ५० ओटा मालबाहक गाडीमात्र नेपाल प्रवेश गरेका छन् । यस्तै,..
Results 889: You are at page 17 of 30